ကယ်လီဖိုးနီးယား တောင်ပိုင်းတွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့် ရေကြီးမှု၊ တောင်ပြိုမှုမျ? - Yangon Media Group
ကယ်လီဖိုးနီးယား တောင်ပိုင်းတွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့် ရေကြီးမှု၊ တောင်ပြိုမှုမျ?
လောစ့်အိန်ဂျလိစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၇
အမေရိကန်နိုင်ငံ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတွင် လွန်ခဲ့သော ရက်သတ္တပတ်အတွင်းက မိုးသည်းထန်စွာစံချိန်တင် ရွာသွန်းခဲ့သောကြောင့် လောစ့်အိန်ဂျလိစ်မြို့နှင့်အနီးတစ်ဝိုက်တွင် မြေပြိုခြင်း၊ ရေကြီးရေလျှံခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်နေပြီး KABC-TV သတင်းဌာနက ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက်တွင်သတင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်သည်။ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်သည် ယင်းမတိုင်မီက တောမီးအ ကြီးအကျယ်လောင်ကျွမ်းခံထားရသော နယ်မြေဖြစ်သည်။
မြေပြိုမှုများကြောင့် မီးအကြီးအကျယ်လောင်ကျွမ်းခံခဲ့ရသော ပစိဖိတ်ကမ်းခြေ အဝေးပြေးလမ်းမ ကြီးအနီးတစ်ဝိုက် မာလီဘူးလမ်းများတွင် မြေကြီးများ၊ ရွှံ့နွံများဖြင့် ပိတ်ဆို့ကာ ယာဉ်အသွားအလာများ ပြတ်တောက်သွားခဲ့ရသည်။ ”ကာဗီကော့လာဒေသ တစ်ဝိုက်မှာ သဲအိတ် ၁၈ဝဝဝ ချထား ခဲ့ရပြီး ယာဉ်သွားယာဉ်လာများ လမ်းမချော်အောင် ဂရုတစိုက်မောင်း နှင်ကြရန် နိူးဆော်ထားသည်” ဟု ခရီးသွားတစ်ဦးဖြစ်သူ ဂရန့်ပါလ်မာက ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်သည်။ လောစ့်အိန်ဂျလိစ်နှင့် ကယ် လီဖိုးနီးယားတောင်ပိုင်း ဒေသများတွင် ကာလအတန်ကြာ မိုး ခေါင်နေခဲ့ပြီး ယခုရာသီဥတုဒဏ် ကို စတင်ခံစားခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ လောစ့်အိန်ဂျလိစ် မြို့လယ်ဒေသ တစ်ဝိုက်၌ မိုးရေချိန် ၁ ဒသမ ၉ လက်မ(၄ ဒသမ ၈ စင်တီမီတာ) ရွာသွန်းခဲ့ပြီး ယင်းသည် ၁၉၉၇ ခုနှစ်ကထက် နှစ်ဆတိုးမိုးရေချိန် ရွာသွန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
မိုးသည်း ထန်စွာရွာသွန်းမှု ကြောင့် မြို့တွင်းကားလမ်းများတွင် ယာဉ်မတော်တဆမှုများဖြစ် ပေါ်နေသည်။ မိုးရွာပြီးနောက် နှင်းများထူထပ်စွာ ကျဆင်းမှုကြောင့် အဝေးပြေးလမ်းမကြီး အမှတ် (၅) ၏ စပျစ်ခြံများရှိသော လောစ့်အိန် ဂျလိစ်နှင့်ဆန်ဂျိုကင်တောင်ကြား ဒေသပိုင်းတွင် နှင်းများဆိုင်းကာ ဒေသတစ်လျှောက် မြင်ကွင်းများကျဆင်းခဲ့ကာ နာရီပေါင်းများစွာ လမ်းများပိတ်ထားခဲ့ရသည်။ ရာသီဥတုဆိုးရွားမှုကြောင့် လောစ့်အိန်ဂျလိစ်မြို့မြောက်ဘက် ၁၅ မိုင် ( ၃၅ ကီလိုမီတာ)အကွာ ရှိ Hollywood Burbank လေ ဆိပ်တွင် Southwest airlines မှ လေယာဉ်တစ်စင်း အောက္ကလံမှ အပြန် လေဆိပ်အဆင်းတွင်လမ်း ချော်ခဲ့ရသည်။ သို့သော်လူအများ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းမရှိခဲ့ပေ။
နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်အား ထရန့်က ကုလသမဂ္ဂ သံတမန်အဖြစ် ခန့်အပ်
အဂတိလိုက်စားမှုကို တိုက်ဖျက်ရန် နိုင်ငံရေး ဆန္ဒပြင်းပြစွာရှိပြီး လုံ့လစိုက် လုပ်ဆောင်ရန်လည?
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ အပေါ် ပြည်သူ စိတ်ဝင်စားမှု နည်း ဟုဆို
အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်တွင် ပါဝင်သူများကို အကြမ်းဖက် တိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေဖြင့် အရေးယူ